Maamulka Faroole Sannad Ka dib – Qore Khadiijo Maxamed Cali. – Radio Daljir
Dhawaan waxa ay madaxweynaha, madaxweyne xiggeenka & golaha wasiirada Puntland u dabaaldegeen sannad guuradii ka soo wareegtey goortii ay gobolka hanteen. Waxa ay isku tumeen sacab badan & Guulwade Farooleyn. Waxa ay shabakadaha wararka soo geliyeen in ay guul ka gaareen arrimaha maamulka & maareynta gobolka, wax walbana in ay u dheceen sidii ay wacadka ku mareen ayey aad ugu celceliyeen. Waxa aan filayey in raggu ay arrinkaa jawaab ka bixiyaan, haddiise ay ka baaqsadeen waa ay ii dagatay waa halkii Aw Muuse Ismaaciil ka lahaa oo kale:
Awal maanso waatanan dumin toban diraacoode
Dibnahayga waa taan ka xiray tan & dayr waaye
Doqontiyo haweenkaa is yiri kani damiinowye
Kolse haddii aan dariiqiisa furo waygu soo degiye
Dig dheh oo dinaahooyin dheh oo dininig roobaad dheh!
13 sanno ayuu maamul ku sheeg ka arriminayey gobolka, wixii ay doonaan bay ku keceen, wax horumar ah oo ay gobolka gaarsiiyeena ma jirin. Shacabku mid aad u qabow oo danihiisa & quutul-yoomkiisa la daba dhigay buu ahaa, iyagaana dugsiyada, arrimaha caafimaadka, nabadgelyada & wixii soo raacaba si danta guudi ku jirto u wada ilaalsanayey. Maamuladii isbeddeley haba kala darnaadaane wax weyn oo looga aayo ma soo kordhin, waxase ay heleen fursad dagan oo ay wixii dadku qabsaday meelahaas kaga tookheen iyaga oo ku faanaya.
Aan soo biyadhaco e, markii Faroole la dooranayey sidii kuwii isaga ka horreeyey waxa doortay Gole Mayeeraan ah oo wixii lagu horsameeyo ee khaldan aan marna arki karin iyaga oo ilaalsanaya mushaarkooda & magaca loo dhoodhoobay ee sida fudud loogu dul waray. Lacagay kala gurteen, deedna faraqa ayey ugu shubeen Faroole guushii oo uusan dhib badan u soo marin. Maalinkaa ayey dhimirkiisa saaqday daroogo shaydaani ah oo tustay in uu yahay:
Guulwade Faroole, Aabbihii Garshada, Gobolkayagoow!
Waxa uu markiiba magacawday gole wasiiro oo badidoodu ah qurbejoogayaal ku soo hungoobey nololihii ay ku dhex noolaayeen, halkii uu shaqada abuurantah uu ka siin lahaa dadkii dalka joogey goor & ayaanba ee u baahnaa in ay shaqo helaan aqoonteedana lahaa. Mid walba oo dibbeda laga soo waaridey waxa uu magaciisii ka hormariyey ereyga Doctor, dadkii ay dalka ugu tageen ee shaqooyinka ay hayaan la baalmariyeyna waxa ay ula dhaqmeen sidii ay dugaag ama carruur shalay dhalatay oo kale yihiin. Halkaa waxa ka soo baxay ?Golaha Wasiirada ee Diyaarad ku Joogga ah? oo aan wax dan ah ka lahayn wixii dalka ka dhaca waayo waxa ay ku abtirsadaan dalal kale baasaboodhana jeebaday ugu wada jiraan. Shaqooyinkoodii way gabeen waxana ay hawl ka dhigteen dibed meer, maalinba meel sooryo ka ugaarsi & magac been ah ku qaraabasho inta ay sii jireyso Alle uun ogyahay. Falalka noocaas ah oo dhan lala yaabi maayo oo waa laga filayey, waayo hore ayaa loo yiri ?hal xaaraan ihi, nirig xalaal ah ma dhasho,? oo habkii doorasho & xulasho ee ay ku yimaadeen iyaga & madaxweynahooduba ayaa xaaraan ku dhisnaa ?qurunna caraf lagama sugo?.
?Arrimihii amaanku faraha ayey ka baxeen, waxana uu madaxweynuhu ku soo dhigtay warbixintiisa sannadka in ay wax weyn ka qabteen oo ay ciidankii mushaar siiyeen, edbiyeen oo kal mookhaleen, taasina waa been caamada uun loo sheego oo markii uu qabtay xukunka amaanku meesha uu maanta marayo kun goor ayuu dhaamey. Imika maalin walba waxa la dilayaa dadkii ay mas?uul ka ahaayeen nabadgelyadooda, masjidyadii ayaa dharaar cad loogu dhacayaa, goortii la doono ayaana la ugaarsanayaa, magaalooyinkii waaweynaa dhexdooda ayaa har & habeen la isku dooxayaa?taas haddii Faroole nabadgelyo ilaalin u yaqaan waa la inoo yaabaa.
Waxa aan dhisnay buu na yiri dastuur gobol, waase mid aan dadkaba laga wargelin codna loo qaadin oo weli dabayluhu ruxayaan, qodobo badan oo is burinayaana ka buuxaan. Waxa ay aad iskugu mashquuliyeen doorteenna calan araggi ba’ay oo degdeg & durbaan been lagu ansixiyey, loona xilsaaray xubnihii ka haray Xisbigii hantiwadaaga Kacaanka Soomaaliyeed oo aan weligi horumar & aragti dheer toona looga baran, in calankaas lagu xulay degdeg & cadli darrana waxa abdo u ah qodobadan kooban:
a) Xilli laba asbuuc ka yar baa loo qabtay in masiirka ummadda calan loohgu doono sharuudo ayaa lagu xiray, markii la doortayna sharruuddii ugu horreysey guddigii baa jebiyey, waxase loogu garaabi karaa armayan taariikhda calanka qarankooda & dalkoodaba ayan wax weyn ka garanayn (waa in calanka Soomaaliya meel kaga jiraa naqshada ayey yiraahdeen), kan ay qaateenna buluug tikh ah oo weliba biyihii badda oo nasakhani ku jiro ayaa ku jira halkii uu baluug khafiif ah ka noqon lahaa, waxa ayna u egtahay xitaa in ayan weligood maqal miraha heesta ee sifeeya astaanta calanka Qaranka ee uu qoray Cabdillaahi Qarshe, ahaana:
Waa cayn oo
Inaga keenu waa
Cirkoo kale ee
Aan caadna lahayn
Ee caashaqa ee!
c) Miraha heesta ee lala tegey aqalka baarlamaanku waxa ay ahayd mid hore loo sii qorsheeyey oo aan calanba raad ku lahayn, waxana uu bandhigga bulsho ahaa mid been ah oo hore go’aan loo sii gaarey lagu xalaaleysanayey, dunidana been loogu sheegayey, waayo haddii daacad laga yahay arrinkaa waxa ay ahayd in:
1) Wakhti dheer ugu yaraan lix bilood loo qabto tartanka caynkaa oo kale ah,
2) La soo reebo ugu yaraan shan calan & shan astaamood oo golaha la horgeeyo si ay fursado doorasho u yeeshaan,
3) Dadka shantaa astaamood iskugu soo haray lagu casuumo in ay golaha hor tagaan oo difaacdaan fikiradooda,
4) Deedna sidaa wax xaq ah oo loo wada dhan yahay loogu codeeyo oo ay u soo baxaan,
5) Ay astaamaha midabada & fikirka calamadu noqdaan kuwo himilo Durugsan & aragti dheer oo fog leh ee aan lagu koobin midab baa barwaaqo ah & midab baa nabad ah toona sida imika ka muuqata.
Arrimaha murgey waxa ka mid ah ee ay tahay in dawladdu wax ka qabato haddii ayan indhaha is tirayn: nabaddii oo luntay, dadkiina har & habeen dariiqyada xaq darro loogu laynayo. Jaajuusiin la baxday PIS oo dadkii & dawlad ku sheegtiiba ka saayacleysey oo naqaskii ku xidhay. Dalkii wuxuu noqday mid dano shisheeye loogu taliyey oo maalin walba wixii aan Zenawi raali ka ahayn cinqaab lala beegsado. Dadkii rixinka ahaa ee Soomaaliyeed oo ay cadaawad dawladdu u muujisay kana dhigtay mid la xidho & mid Addis seylad ku taal laga iibiyo.
Madaxda dowladda oo aan wax dan ah ka lahayn gobolkan ee ka dhiganaya fursaddan u soo martay tii ay Xamar ugu sii gudbi lahaayeen oo quud aan jirin ayey qoryo u sii guranayaan. Waxa taas markhaati u ah Madaxweynaha oo inta badan arrimaha Xamar ka hadla oo weliba si guracan oo aan odaytinnimo ahayn u abbaara, waxana uu iloobey baa la oran karaa in ?raq waliba raggeeda u taal?.
Gunnaanadka & gebogebada way ku jiraan xubnaha dawladda kuwo tayo sare lihi, laakiin waxa ka badan kuwa aan guul in ay hantaan iskaba daaye aan xitaa hollin karin oo jubbadahooda waaweyn ayan wax uga hooseyn. Dalkani waxa uu u baahan yahay kuwa nabaddiisanolosha u tahayee ay colaaddiisu dhibayso ee aan niyadda ku hayn meel kale oo ay ka tagaanin maamulkiisa gacanta loo geliyo deedna la dhawro bal in ay kuwan baqa-joogga ah ay dhaamaan, waanan hubaa in ay dhaami doonaan.
Madaxweynuhu waxa uu u baahan yahay in uu ku shaqeeyo ?hadal yar & hawl badan?, samir & dulqaadna erayadiisa & adinkiisaba ku aroorsho. Waxa kale oo Madaxweynaha la gudboon in uu qoyskiisa ka dheereeyo golayaasha maamulka dawladda oo ay shacabkooda dhan ka galaan. Maxaa loola yaabey Maxamed Siyaad Barre, dal weyn oo wax kala qarin kara ayuu madax u ahaaye, halka Faroole ilmihiisii & kuwii uu adeerka & abtiga u ahaa xayndaabkii yaraa ka soo buuxshey oo weliba uu garan la?ayahay in meeshu aqab tahay oo ayan wax badan bulshada ka qarin karin. Sannadkaasi guuldarro & ceeb ayuu ku dhammaaday ?haruubkii daatase dabadiisaa la qabtaa? oo wakhti kama tegin weli ee ha is xisaabshaan.
Khadiijo Maxamed Cali,
Garowe, Puntland, Soomaaliya.